निलीमा आचार्य Archives | साहित्यपोस्ट
त्यो विशेष दिन
निलीमा आचार्य	 ८ जेष्ठ २०७९ ०६:०१ 0
त्यो हाम्रोलागि महत्त्वपूर्ण दिन थियो । पुस महिनाको जाडोलाई चुनौती दिँदै हामी सबैजना बिहान 6-30 बजे स्कूल प्राङ्गणमा एकत्रित भएका थियौँ , वर्षमा एकचोटि सबैजना एकसाथ मिलेर त्यो विशेष दिनको आयोजना गरिन्छ, त्यसैले सबैजनाको उत्साह असीम…
‘कागजको नाउ’को यात्रा
निलीमा आचार्य	 ११ बैशाख २०७९ १८:०१ 0
मेरो हातमा यसबखत असम नेपाली साहित्य सभाका महासचिव आदरणीय रुद्र बरालको दोस्रो काव्यकृति "कागजको नाउ" छ । उनको पहिलो काव्य कृति "तेस्रो आँखो"लाई पाठकवर्गले धेरै रुचाएका थिए र अति थोरै समयमा धेरै चर्चामा आएको थियो एवम् आइरहेको छ । ठिक…
निलीमा आचार्य	 ६ चैत्र २०७८ ०७:०१ 0
धनेलाई हिजोआज ठूलो मान्छे हुने रहर चढेको छ । कता हो उसले सुनेको छ - अङ्ग्रेजी बोल्न र लेख्न जान्ने मान्छेलाई नै ठूलो मान्छे भन्छन् भनेर । आफ्नो मातृभाषामा जस्तोसुकै गहकिलो लेख, भाषण, कविता प्रस्तुत गरे पनि कसले बुझ्ने र ? एउटा कविता…
निलीमा आचार्य	 १७ फाल्गुन २०७८ ०६:०१ 0
"एटि कुडी दुटि पात रतनपुर र बागिसात" आँगनमा भएको आँपको रूखमुन्तिर चौकीमा बसेर तल्लीन भइ सोमनाथ गीत सुनिरहेका थिए । रूखको एउटा हाँगामा एउटा ढुकुर "ढुकुरकुर" राग छेड्दै थियो, अर्को हाँगामा पोथी बसेकी थिइ, सायद पोथीलाई फकाएको हो !…
१ असार २०७८ १७:०१ 0
जीवनलाल एक जना सफल व्यक्ति हुन् । धेरै कष्ट गरेर उनले सफलता प्राप्त गरेका छन् । जीवने उनको परिचित नाम हो । अगाडिदेखि गाउँका मान्छे उनलाई " जीवने" भनेर बोलाउने गर्थे । "यसो गर जीवने!" "उसो गर जीवने!" उनलाई "जीवने" भनेको सुन्दा…